Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Waxbarasho / Kaalmada iyo amaahda laga helo CSN
Miyaad ahayd bilaa shaqo wakhti dheer oo u baahantahay inaad dhigato waxbarasho dugsi sare si aad u hesho shaqo? Markaas waxaad xaq u yeelan kartaa taageerada bilaabida waxbarasho. Waa kaalmo aad heli karto inta lagu jiro qiyaastii hal sano si wax looga barto waxbarashada dadka waaweyn ama kuliyadda dadka waaweyn. Si loo helo xaqa taageerada bilaabid waxbarasho waa inaad bilaa shaqo tahay wakhti buuxa una dhaxayso 25 iyo 60 jir. Waxaa xitaa jira dhowr shuruudo oo ay tahay inaad buuxiso.